विदेशी लगानी प्रतिबद्धता दोब्बरले बढ्योे «
विदेशी लगानी प्रतिबद्धता दोब्बरले बढ्योे
नेपालले लगानी सम्मेलन आयोजना गरी विदेशी लगानीकर्तालाई ‘रेड कार्पेट’ बिच्छ्याएसँगै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) प्रतिबद्धतामा उत्साहजक वृद्धि भएको छ । मुलुकमा साना तथा मध्यमस्तरीय लगानी भिœयाउने पहिलो ढोका उद्योग विभागमार्फत गत वर्ष (२०७४) मा झन्डै ३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ ।
विभागका अनुसार गत वर्ष सबैभन्दा बढी ऊर्जा क्षेत्रमामात्रै झन्डै २ खर्ब लगानी प्राप्त भएको छ भने उत्पादनमूलक उद्योगमा पनि उत्साहजनक वृद्धि भएको छ । विभागका अनुसार गत वर्ष ४ सय ८९ उद्योगका लागि २ खर्ब ९४ अर्ब ३७ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । अघिल्लो वर्ष (२०७३)मा भने ५ सय ९ उद्योगका लागि १ खर्ब ५० अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको थियो । यसअघि २०७२ को साउनदेखि चैत मसान्तसम्ममा ३ सय ५३ उद्योगका लागि १ खर्ब २४ अर्ब लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको थियो ।
तत्कालीन उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीको पहलमा सरकारले गत वर्ष गरेको लगानी सम्मेलनमा १४ खर्बभन्दा बढी लगानीको आश्वासन प्राप्त भएको थियो । यस्तै, गत वर्ष संघीय स्थानीय तथा प्रदेश गरी तिनै तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनु, बहुमतप्राप्त सरकार बन्नु तथा लगानीमैत्री वातावरणमा सुधार आउँदै जानुको प्रभाव वैदेशिक लगानीमा देखिएको हो । विभागका अनुसार प्रतिबद्धता बमोजिमको लगानी भित्रिएमा ४ सय ८९ उद्योग थपिनेछन् भने २९ हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउनेछन् ।
सरकारले कृषि तथा वन्यजन्तु, निर्माण, उर्जामूलक, उत्पादनमूलक, खनिज, सेवा, सूचना प्रसारण तथा सञ्चार प्रविधि तथा पर्यटन विधामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भिœयाउँदै आएको छ । विगतमा वर्षमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा विदेशी लगानीको अवस्था निराशाजनक भएपनि ०७४ मा भने यो क्षेत्रमा निकै आशा देखिएको उद्योगीहरूले बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निर्वतमान अध्यक्ष पशुपति मुरारका विदेशी लगानीका लागि विगतमा अस्थिर सरकार नै मुख्य बाधक भएको बताउँछन् । अब देशमा बहुमतप्राप्त सरकार आएको र लगानीको बातावरण बन्दै गएकोले यो वर्ष अझ लगानी बढ्नसक्ने उनको भनाइ छ । स्वदेशी लगानी बढ्यो भने विदेशी अवश्य बढ्ने भएकोले स्वदेशी लगानी प्रवद्र्धनमा जोड दिन र ऐन नियम समयानुकुल बनाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
यद्यपि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आउने मुख्य ढोका उद्योग विभागमा प्रतिबद्धता धेरै भए पनि वास्तविक लगानी भने आउन सकेको छैन । एफडीआईको नाममा उद्योग दर्ता गरी लाइसेन्स होल्ड गर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् । एफडीआई प्रतिबद्धता बर्सेनि बढे पनि सोहीबमोजिम लगानी भने भित्रन सकेको छैन । विदेशी लगानीमा दर्ता भएका उद्योग कति छन् र तिनमा बास्तविक लगानी कति भएको छ भन्ने एकीकृत तथ्यांक हालसम्म कुनै सरकारी निकायसँग छैन । लगानी सम्मेलनको उत्साह र लगानीलाई सार्थक तुल्याउन मन्त्रालयले देशभर दर्ता भई संचालन इजाजत लिएका उद्योगको पछिल्लो अवस्थाको खोजी सुरु गरेको छ । उद्योगहरू दर्ता भएपनि कुन उद्योग कस्तो अवस्थामा छन र कति बन्द भए भन्ने विवरण नभएपछि सरकारले उद्योगको अवस्था खोज्न लागेको छ । विभागले तथ्यांक संकलनका लागि विभागले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ तथा जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघलगायतसँग सहकार्य गरेको छ ।
कुन क्षेत्रमा कति लगानी ? (रु. १० लाखमा)
क्षेत्र २०७३ २०७४
कृषि तथा वन ३५०४.०० २३५२.७०
निर्माण १०००.०० ५४२१.००
उर्जामूलक ८४८३६.१७ १८२४८०.६०
उत्पादनमूलक २८४२५.४५ ७८४१९.८९
खनिज ७१.७ s २२३२.३०
सेवामूलक १८३४५.९७ ७१४६.१६
पर्यटन १३८६५.१२ १५३४०.५०
सूचना तथा सञ्चार ५१० ९८६.५